1. HGH mukuvaka muviri, musimba kukura
2. Kukosha kwesimba rinodzidzisa musimba kukura
3. Sei ndichirovedza muviri, uye mishonga haina kukura?
4. Mudzidzisi wega uye kukosha kwekutonga munguva yeHGH
5. Kukosha kwePeprotein yeDeutro Diet yeHGH yega
6. Kukosha kwekurara neHGH injections
7. Muzhinji wezvibereko nemiriwo muzvokudya
8. Kuramba kana kuderedza doro mukurapa kweHuman Growth Hormone
9. HGH - accelerator yemugumisiro wako ne 200-300%
10. Mutsara unokura sei neHGH?
11. Cardio yemwoyo: kunaka kunze - utano mukati
HGH mukuvaka muviri, musimba kukura
Simba, kutsungirira, kusununguka kwemisimba yakakwana ndiyo mitezo mikuru mitatu inogadzirwa nemunhu wese anoda kuita. Uyezve, kutadza kwekunze kwekuenzana kunoiswa panzvimbo yekutanga: haisi pangozi kuti mutambo uyu wakagamuchira zita rechipiri "kuvaka muviri", mune mamwe mazwi "mutsika yemuviri".
Hazvisi zvakakosha kuti mutambi wacho anoremekedzwa sei, chinhu chikuru ndechekusimbiswa kwemasumbu ake, zvisinei kuti chiyero chinowirirana nemitemo yakagamuchirwa. Nokuti vashandi ava vanoda kushanda zvakaoma uye zvakaoma, kunyange kuburikidza nemarwadzo.
Kuti kukurumidze chinangwa, vadzidzisi vezviitiko vanoziva vanorumbidza kuti Tenga Genotropin - mushonga unobva pakuwedzera kwevanhu hormone.
Kukosha kwesimba rinodzidzisa musimba kukura
Kutanga makore anoda kusvika 140, kuvaka muviri kunoparidzirwa nemafungiro ake zvakanyanya kuitika uye panguva imwechete kufambiswa kwemavara ose emasumbu. Nokudaro basa guru rekushanda kwega kwega-kuvaka musasa mashoma. Kupfuura zvose izvi zvinopa simba kudzidzisa. Zvishanu zvadzo mukugadzira muviri zvinonzi "primary polyarticular".
Izvi zvinosanganisira zvikwereti, kuputika, bhenikeri, tsvimbo inokwevera kune bhanhire uye bhendi mhepo yakamira. Chimwe nechimwe chezvikamu izvi zvine chinangwa chayo: kubva pakuvandudzwa kwemuviri wemakumbo kusvika pakusimbiswa kwemimba. Iyo yakazara yakaoma inotarisirwa kuhuwandu hutsva. Vadzidzisi vemuviri vanosiyanisa 4 zvinobatsira zvikuru zvekudzidzisa simba:
- Kukura kwechisimba panguva inenge ichipisa mafuta. Pakati pezviito izvi, muviri unodya zvinodhaka zvakawanda. Inobatanidzwa uye makagidhyidrate stock - glycogen. Pakupera kwekuvhima, zvirongwa zvekuvandudza zvinotanga kupisa mafuta.
- Kukurumidza kwemasabolism. Somugumisiro, chido chinowedzera, ichocho chakakosha zvikuru pakuvaka masimba mashoma: hapachazovi nekukura kunze kwekuwedzerwa kwekakori. Izvi zvinonyanya kuitika kune vanotambira vashoma vanoita kuwanda kunonetsa.
- Dzidza panguva imwe chete mapoka makuru emasumbu. Maererano nekutsvakurudza kwesayenzi, iri pasi pemamiriro ezvinhu aya kuti muviri unotanga kuwedzera testosterone uye kukura hormone, iyo inobatsirawo kuwedzera mumisasa mashoma.
- Kuita kwemhepo yekufema uye inotyisa. Izvi zvinowedzera huwandu hwehomoni, iyo inozopedzisira yava nemigumisiro yakanaka pamusana wekukura.
Mhedziso iyi yakajeka: simba rekudzidzisa rinoda nzira yakakomba, yakazara. Kana iwe uchangobva kuvhara chifuva chako kana biceps, iwe hauzokwanise kuzadzisa zvaunoda.
Sei ndichirovedza muviri, uye mishonga haina kukura?
Uyu mubvunzo unowanzobvunzwa nevatangisi. Sekutonga, tiri kutaura pamusoro pevaya vari kuedza kudzidzira kuvaka muviri pachavo, pasina kutungamirirwa nemudzidzisi. Pane zvikonzero zvakawanda.
Chokutanga, mutambi wechidiki, sekutonga, anotora nyaya yekushingaira, asi asina ruzivo rwakakodzera.
Nokudaro, inowanzobatanidza maitiro asingabatsiri muchirongwa chekudzidzisa chinoita kuti uwedzere mutoro. Uye sezvo pasina huno unyanzvi hwekuunganidza simba rekudzidzisa kwenguva refu, chinhu chikuru hachikwanisi simba.
Chechipiri, vatangisi vanowanzoputsa nzira yekusimbisa simba. Somugumisiro, kana mutoro usingakwaniki wakasikwa, kana mushuga unoda kusimbiswa hahushandi. Mukuwedzera, zvisingamboiti mukuzviongorora-chero ani zvake anoita nhamba yakakwana yekudzokorora - panofanira kuva 5-7 kwavari. Iyi yakawanda inopa hunobudirira hukuru hwemasisita mashoma.
Mutangi wemuviri wekutanga, uyo akaziva kushandiswa kwakarurama kwezvidzidzo zvekutanga, anogona kuita mumwedzi yekutanga kuwedzera uremu hwemuviri ne 5-7 kg.
Mudzidzisi wega uye kukosha kwekutonga munguva yeHGH
Kuti usashamisika kuti nei kudzidziswa kusingabatsiri, uye kwete kushatisa simba, zvinonzwisisika kushandiswa kumabasa edzidzisi wega. Ngatitendei kune zvakaitika kune vakakurumbira Jeffrey Life, uyo anotenda kuti kubudirira kwake mukugadzira muviri kunonyanya kukonzerwa nebasa uye kusagadzikana kwemutidzidzisi.
Chimbofungidzira: pamisangano yose, muviri wako unofanirwa kuenda kumucheto weunyanzvi hwepanyama kuitira kuti usakure chiito ichi nekuwedzera mutoro. Zvinogoneka kuti kana iwe ukazozviita iwe, uchazvidemba uye unoramba kushanda "kuburikidza neni handigone". Kana iwe uchitenda zvinyorwa, zvinoitika kakawanda: pamusoro pe60% yevatambi vatsva vanoita chirongwa chekudzidzisa hafu. Asi mutungamiri haazobvumi kuti agare akasununguka - nekuda kwemhinduro yako.
Zvechokwadi, mudzidzisi wega haasi mutongi uyo anoda kukutambudza. Zvakangosiyana. Haazobvumi kuti mutambi wacho apedzisire apedza muviri, asi achaisa pfungwa pakugadzirisa nzvimbo dzisina simba. Mutevedzeri wakanaka achakudziridza iwe pachako purogiramu uye kudya. Asi chinhu chakanyanya hachisi kunyange mune izvi, asi mukukwanisa kwomudzidzisi kuti aone kuti maitiro api api uye maitiro ekudzidzira achave akakubatsira iwe.
Kukosha kwepuroteni yakakura kudya kweHGH
Munguva yekushanda kwakasimba, apo mabheti e-glycogen akaderedzwa, muviri unotanga kuzadza simba nekuda kwemapuroteni, iyo ndiyo nheyo yemishupa yemisumbu. Saizvozvowo, nhamba yayo mumasero inofanira kugara ichidzorerwa.
Kuti uite izvi, unofanirwa kutevera kudya kwakakosha neproteinini yehuwandu hwezvokudya: mutumbi wemizimba unoda 2-3 gramu pazuva nekuda kwe kilogram imwe yehutatu hwehuviri.
Izvi zvinoreva, nehutengo hwe 100 kg, mutambi wacho anofanira kuwana zuva nezuva 200-300 g yeprotheni. Ndekupi kwaungawana?
Chekutanga chinyorwa ndicho chikafu chako chinowanzoitwa. Iva nechokwadi chekuisa mukati maro:
- mazai vatsvene
- nyuchi uye veal
- huku nehutu nyama
Mubvunzo wekukuvadza uye kubatsirwa kweiyo yolk inoramba ichikakavadzana. Vatambi vakawanda vanozvikoshesa semugove wemafuta anokosha nemavhithamini. Kune rumwe rutivi, mafuta ane acid anononoka kugadzirwa kwekukura kwehomoni, nokudaro kuderedza kushanda kwekuvaka musuru.
Dzimwe nyanzvi dzinopikisa kuti mapuroteni kudya kwezvokudya zvakajairika zvakakwana kuti adzorere kumishu yomuviri. Zvisinei, pamatoro akakwirira inokurudzirwa kuwedzera mitambo yezvokudya, iyo ine protein yakabva kuna whey. Iyo inobatsira zvikuru ndeyokurumidza kukurumidzira kwekudya: maminetsi mashomanana, apo nyama inogadzirwa kweawa rinopfuura awa.
Zvakasiyana, zvinofanira kutaurwa pamusoro pekudiwa kwekuwedzera kemori yezvokudya. Muviri wemuviri anodikanwa kukwanisa kusvika ku 3000 kcal pazuva, uye ipapo chete musimba kukura huchabudirira.
Kukosha kwekurara neHGH injections
Pamwe chete nekushanda nguva dzose uye kudya kwakakwana, hwaro hwekufambira mberi mukugadzira muviri kunopera zvakakwana. Pano basa guru rinotambidzwa nehope yeusiku, iyo inoda kupiwa maawa mashoma 8. Nekuwedzera kwemajeri emutoro, nguva yezororo inogona kuwedzerwa kusvika kumaawa 9-11.
Nei zvichikosha ichi?
Ichokwadi ndechokuti panguva yehope, kubudisa mahomoni kunoshandiswa, kusanganisira HGH. Mumaawa ekutanga anonzi 2 mushure mekunge avete hope, huwandu hwayo mumuviri hunowedzera zvakanyanya, zvichiita kuti kuwedzera kwekuparadzanisa mafuta acids uye kunokonzera vanabolic nzira. Zvakanaka, iwe unoda kuzorora masikati - nezvemaawa 1-2.
Kana pane chimwe chikonzero usiku hwakapfuura hwakanga husina hope, zviri nani kutsiva kudzidziswa. Hazviiti kuti iwe uchange uine kure mune zvekuneta, asi iwe unogona kukuvadza hurongwa hwenheyo.
Muzhinji wezvibereko nemiriwo muzvokudya
Pasinei nokuti chibereko chine mbiri yakasimba sechinhu chinopa mavhithamini, vazhinji vanogadzira muviri havafariri kuishandisa. "Zvinotyisa" chikonzero - zvinyorwa zve fructose, iyo inoshandurwa kuva mafuta.
Zvisinei, usakanganwa kuti zvinyorwa zveglycogen pachiropa zvinoshandiswa panguva nenguva uye zvinoda kudzorerwa zvakare. Mukuwedzera, fructose ichapa glycogen uye musimba, kudzivirira kupera kwavo nokukurumidza mukurovedza.
Saka, misi yezuva ndeyekuita:
Kuronga kwakadaro kunobatsira kutora muviri kwekugadzirisa zvinhu uye kuupfumisa nezvinhu zvakakosha.
Kana iri miriwo, zvigaro zvevatambi hapana mubvunzo. Bodybuilders inonyanya kukurudzirwa artichoke, pepper inotapira, sipinashi uye zvakasiyana-siyana zvekakichi:
Mbeu yeBrussels, broccoli uye kare. Izvi zvinosarudzwa kwete chete nekuda kwehuwandu hwevhithamini, fiber, calcium, manganese, mhangura. Mukugadzirwa kwavo kunogona kuonekwa uye polyunsaturated mafuta acids omega-3 uye omega-6, iyo inobatsira kuderedza cholesterol mazinga uye kuderedza dambudziko rezvirwere zvepfungwa.
Mitambo yezvokudya zvinovaka muviri inokurudzira kudya zvishoma ne3 servings yemiriwo yemvura zuva rimwe nerimwe uye 2 michero yemidziyo ye 90 g imwe neimwe.
Kuramba kana kuderedza doro mukurapa kweHuman Growth Hormone
Izvo zvinokonzera kukanganisa doro pamuviri zvinonyatsozivikanwa, asi munyaya iyi zvakakosha kutaura izvo zvinokuvadza doro ndezvivo zvekugadzira muviri. Ethanol iri mune zvinwiwa zvinopisa inoderedza mapuroteni ne 25%.
Izvi zvinoreva kuti kunwa kwechina kunoderedza kushanda kwekuvaka musuru kwaunoshanda zvakasimba.
Mukuwedzera, doro inoderedza uwandu hwe testosterone ne 24% - steroid inobata musimba kukura. Saka kukanganisa kuri kaviri.
Mune ramangwana, nguva dzose zvipiriso zvinodururwa - kudonha kukuru kwezviratidzo zvemasimba. Saka, kana iwe wakatarisana kufambira mberi, zviri nani kuramba doro zvachose.
HGH - accelerator yemugumisiro wako ne 200-300%
Kwemazana makumi emakore, HGH yakaramba iri inonyanyozivikanwa neanabolic mishonga pakati pevarimi vemapurisa pasi pose. Inowanzoita kuti puroteni ishande uye inobatsira kuvaka musumbu. Kana uchiedza kuita "chimiro chemuviri" nokukurumidza sezvinobvira, mhinduro inogadzirisa ndeyekuti ACHETER HGH uye kuitora maererano nemutengo unorayirwa.
Chido chechirwere chinokonzerwa nekubatsira kwayo pachena:
- Kusiyana nevanabolic steroids, haisi iyo hypertrophy yezvinodiwa musumichu inokonzera, asi kuwedzera kwehamba yavo
- pamwe nekuvaka musimba mashoma kunobatsira kuderedza huwandu hwehutu hwakatsetseka;
- inodzivirira hutakiti hwemenisci, intervertebral discs, pamwe chete nemigumisi kubva kumashirairasi
- inowedzera simba rose rekuchengetedza kwemuviri
Mukuwedzera, nokuda kwekukuvara kumapfupa, maziso nemasumbu, kuwedzera hormone kurapwa kunoshanda: chigadzirwa chinodzorera masero uye chinoita kuti chirwere chisimbiswe nokukurumidza
Zvakakosha kuyeuka: Human hormone kukura haisi mujenya wezvishamiso kubva pamasumbu achakura kunze kwekuedza kwako. Izvi zvinongova mubatsiri, zvichikubvumira kukurumidza kubudirira kwechigumisiro ne2-3 nguva.
Zvechokwadi, izvi zvose zvinoshanda chete kumushonga wepakutanga, uye kwete kune vamwe vanobvumirana navo. Vanoda kutenga mutemo wemunhu yakakwirira yekuramba hormone - taura chete nomumiriri wepamutemo wezvigadzirwa.
HGH Thailand anopa chibereko kune dzimwe nyika dzenyika. HGH inotengeswa paIndaneti nenzira imwechete ine mabhizimisi ose uye zvigiti, uye zvinotengeswa zvakananga kuBangkok. Kuendeswa kunzvimbo chero ipi zvayo munyika kunotora mazuva akawanda e7.
Mutsara unokura sei neHGH?
Izvi zvinoda 2 zvinhu - simba uye magetsi. Yokutanga iwe unofanirwa kupa nguva dzose neprotein yezvokudya, yechipiri inogadzirwa nekudzidziswa kwakakodzera. Pakati pesimba rinowedzera nepamusoro wekutakura mumisungo yefishu michi-breaks inoitika. Vagadziri vemasero akabatwa vanopa zviratidzo zvekudzorera zvinodiwa.
Iko yepuroteni yakatanga, iyo miviri yakatanga kuiswa mukati memahara akaoma. Iyi ndiyo nzira iyo musimba inokura, kuwedzerwa kuwanda kwayo uye kuwanda. Ndicho chikonzero chekuzadzisa chikonzero chaidiwa, vadzidzisi vezvemhizha vanorumbidza kuti vanoita zvinoenderana nemuganhu we simba.
Cardio yemwoyo: kunaka kunze - utano mukati
Hapana anozviremekedza anovaka muviri haazoregi kungosimbisa simba, kungova gomo remuviri. Kuvaka muviri kunomutambo wevanhu vane utano hwakanaka, saka kudzidzira kuwedzera misi miviri kunofanirwa kuwedzerwa nekukwira, mabhasikoro, kushambira uye mamwe maitiro aerobic.
Vanobatsira kusimbisa mwoyo musumbu uye kupemha, kuwedzera simba uye pakupedzisira kunobatsira pakusika kwemuviri wakakwana.